Nchebe ụlọ: kụrụ na nlekọta, foto na ngwa ahụike - Mkpụrụ ubi - 2020
Ulo ụlọ Kamnelomka: kụrụ na nlekọta, foto na ozi bara uru maka ndị na-elekọta ubi
Saxifrage bụ houseplant. Ezinụlọ Kamnelomkov gụnyere ihe dị ka narị osisi abụọ na iri ise.
Ha wee nweta aha ha ka ha wee na-eto eto na nkume, n'ikpeazụ na-eduga ná mmebi ha.
Ịkụ mkpụrụ na ilekọta saxifrage n'ụlọ agaghị abụ ọrụ dị ukwuu.
Ịhọrọ kamnelomku, ị kwesịrị ịṅa ntị dị njikere, ndị gbanyere mgbọrọgwụ.
Nke kachasị mma, osisi a ga-eche na ite dị iche iche, dị ka o kwere mee site na ngwaọrụ ọkụ.
Ọ chọrọ ezigbo drainage, nke ga-echebe mgbọrọgwụ si rotting ruru mmiri stagnation.
A na-atụ aro ịkụcha nkume mgbe okooko. A na-ebipụ akwụkwọ akụkọ ochie, na-enye ohere ịnweta mkpụrụ ọhụrụ ọhụrụ. Tụkwasị na nke ahụ, a ga-ewepụchaa alaka ndị a mịrị amị na ifuru.
Maka ịgbara osisi a, jiri mmiri dị nro mee ihe. N'ime oge site na March ruo October, mmiri kwesịrị ịdị mgbe niile ma na-agba ọsọ ozugbo ị hụrụ na n'elu oyi akwa ụwa amalitela ịmịkọ. N'oge oyi, a ghaghị ịsa mmiri saxifrage obere, ma ala ekwesịghị ikwe ka ala kpoo.
A pụrụ imepụta saxifrage oge ọ bụla n'afọ. Chọta maka obere ihe a ma buru obere ite buru ibu ma kụọ ọtụtụ ntaneti ozugbo.
Echiche! N'okpuru ite ahụ echefukwala wụsa ụrọ nke ụrọ gbasaa, iji nweta mmiri.
Maka onye nnochite anya nke osisi a kacha mma humus ala ngwakọta. Maka nkwadebe ya, ị nwere ike jikọọ akụkụ abụọ nke ala ahịhịa, akụkụ anọ nke ụrọ-sod na otu akụkụ ájá. I nwekwara ike mix otu akụkụ nke peat, humus, ájá, yana humus na akwukwo ala.
N'ogige saxifrage kasị mma ala na mmalite oge opupu ihe ubi. Ebe dị anya n'etiti osisi ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị sentimita abụọ. Mma a na-ekpo ọkụ na chastone, ya mere, a ga-agbakwunye ala ma ọ bụ ogige nkume nke nkume, ebe a ga-akụ osisi ahụ.
Ọ bụrụ na ala n'ime ubi gị nwere ụrọ, ị nwere ike itinye osimiri ájá na sod n'ala n'ebe ahụ, ma mee drainage oyi akwa.
Mgbe kamnelomk na-etolite n'ala na-emeghe, ọ nwere ike ịghagharị ya dịka ọ dị mkpa, mana ogologo oge karịa afọ asaa eto eto na otu ebe adighi akwado ya.
Maka ifuru nke na-etolite n'ime ime ụlọ, ọkpụkpụ dị mkpa mgbe mgbọrọgwụ ya kpara n'elu ụlọ ụrọ.
Mgbe nchekwa na-etolite, ọ ghaghị ịnọgide na-echekwa na ọnọdụ okpomọkụ nke iri abụọ na iri abụọ na anọ ogo karịa efu.
N'oge oyi Ọnọdụ okpomọkụ dị n'ime ụlọ ebe ite na osisi a dị kwesịrị ịdị n'etiti iri na isii na okpukpu iri na asatọ nke okpomọkụ maka iche na leaves variegated na n'etiti iri na abụọ na ogo iri na anọ maka saxifrage na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ihe kachasị mma ga-eche na windowsill nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ ma ọ bụ window window. Ị nwekwara ike ịnweta ya n'akụkụ ugwu. Ma ọ bụrụ na ị kpebie itinye ite ahụ n'akụkụ ndịda, chebe ya na windo ma chebe akwụkwọ ndị ahụ site na ìhè anyanwụ.
Echiche! Igwe ọkụ na-enwusi elu ga-eduga na blanket nke epupụta, ma ezughị oke - na nzere nke ọkụ ahụ.
N'oge okpomọkụ, ị ga-ewepụ ifuru na mbara ihu ahụ, mana echefula iji kpuchie ya na anyanwụ.
Mgbe ị na-akụ saxifrage na ala na-emeghe, tinye ya ka ọ ghara ịdakwasị ụzarị ọkụ nke anyanwụ. Enwere ike idozi nsogbu a site n'ichebe anyanwụ na osisi ọ bụla dị n'akụkụ aka ndịda.
Ụdị ndị ọzọ dị na saxweed gụnyere Saxifrage Arends na Bedran.
Na-enwe mmasị n'ụlọ ahụ Sausage Helm, nke a tolitere n'ụlọ nwere ike ịbụ na foto ahụ:
Ụzọ kachasị ewu ewu maka saxifrage bụ:
A na-atụ aro mkpụrụ osisi ịgha mkpụrụ maka osisi seedlings. Ntughari nkume sitere na nkpuru bu ihe di nma. Ọ bụghị uru ịkụ ha n'ala na-emeghe ozugbo, ebe ha dị obere.
Mkpa! Iji meziwanye mkpụrụ nke osisi, a na-edebe ha na oyi maka ọnwa abụọ.
Mkpụrụ na-agwakọta ya na aja na-akụ n'ime igbe jupụtara ìhè potassium mkpụrụ esịnede griin haus ala, ájá na peat.
Ọ dịghị ihe dị n'elu fesaa osisi adịghị mkpa. Jiri mmiri na-agba ha mmiri ma debe ha n'ime ụlọ ebe ikuku dị elu dị n'etiti iri na asatọ na ogo Celsius.
Ugbua na nke isii, nke itoolu, i nwere ike ịhụ na mkpụrụ ahụ amalitela. Mgbe ahụ ị ga-achọ gbadaa osisi, na-ahapụ ike ha. Mgbe seedlings na-etolite, ha nwere ike kụrụ n'ime ite ma ọ bụ tinye ya n'ala na-emeghe.
Maka ama ndi ozo banyere eto eto na osisi, lee vidiyo:
Iji kpoo osisi ahụ na nchara, ọ dị mkpa iji belata otu akụkụ nke akụkụ ahụ, bụ nke a na-etinyere na anụ ụlọ gị na usoro nke uto ya. Mee ya kacha mma ke ndaeyo.
Wepu ala ya na ala ma wunye ya. Mgbe oghere na-agbanye mgbọrọgwụ, ka ya zuo ike n'otu ebe ahụ, ọ pụkwara ịtụgharị ya na-esote mmiri.
Maka ịzụlite nke saxifrage ịkwanye ọ dị mkpa iji gbanye mgbọrọgwụ dị ogologo ma gbasaa ala mmiri ka mmiri ahụ wee dị n'elu. Wunye prikopanny na humus na nwa ehi chebe ala site na ihichapu.
Mgbe ome ahụ gbanye mgbọrọgwụ, kewapụ ya ma kụọ ya n'ime mkpụrụ nke ejiri akụkụ abụọ nke humus ala, otu akụkụ nke ájá na otu akụkụ ala sod. Mgbe ịgha mkpụrụ, oge ịse ahụ chọrọ ọtụtụ ịgbara mmiri.
Saxifrage ọ bụghị nanị na ọ na-amasị anya na ịma mma ya, mana o nwekwara ihe ngwọta dị ịrịba ama.
Akwụkwọ ya nwere flavonoids, alkaloids, saponins, glycosides na mmanụ ndị bara uru ndị ọzọ.
Ndị na-agwọ ọrịa n'oge ochie achọpụtawo na osisi a nwere antitumor, antiseptic, ọgwụ mgbochi na antifebrile eme ihe n'anụ ahụ.
A na-eji akwukwo saxifrage emepụta ihe ọṅụṅụ, nke a na-etinye n'èzí. na ntu oyi, uda ma obu mmanu, nakwa iji belata ihe mgbu na otitis. Iji ihe ọṅụṅụ a mee ihe na-enyere aka n'ịgwọ ọrịa ndị dị ka ascites, ụkwara ume ọkụ na ọrịa ụjọ.
Kammelomki kwadebe broths na infusions, nke a na-eji iji belata okpomọkụ, aka ịkwụsị vomiting ma gwọọ ọrịa.
Ma, dịka ị maara, iji ọgwụ ọgwụ ọ bụla eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi nsogbu ahụ mmadụ. Eji nlezianya mee ihe maka ọgwụgwọ maka ọgwụgwọ n'oge ime na lactation. Tụkwasị na nke ahụ, ọ dịghị atụ aro maka ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na bradycardia na thrombosis.
Njiri a na-ejighị achịkọta nke osisi a nwere ike ime ka dermatitis.
A na-akpọkarị pesti nke saberworm ududo ududo. Ọdịdị ya na-emetụta oke ikuku nke ikuku. Mmetụta ikuku nke ikuku na-akpata ọdịdị nke ọrịa fungal na powderde mildew. Usoro ọgwụgwọ ga-enyere aka dozie nsogbu ndị a. ọgwụ ndị nwere ọla kọpa.
Ọtụtụ mgbe, ikpuru na-awakpo ifuru ahụ, nke a ghaghị iwepụ aka ya. Mgbochi Anticoccidal ga-enye aka ikpochapụ pests ndị a.
Ọ bụrụ na epupụta kpuchie ya na obere oge ntoju, mgbe ahụ nwa gị nwanyị mebiri site na aphid green. Na nke a, mezie ya. pyrimorom
Idezi nke ọma nke saxifrage na ilekọta ya ga-enye gị ọṅụ nke ichebara okooko osisi ya ọtụtụ afọ.